माइसंसारका पाठक महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँदा हुन् त कसले जित्थे कांग्रेस सभापति? – MySansar
माइसंसारका पाठक महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँदा हुन् त कसले जित्थे कांग्रेस सभापति?
Posted on March 4, 2016 by Salokya
कांग्रेस महाधिवेशनका लागि तीन जना सभापतिका उम्मेदवार बनेका छन्- रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा र कृष्ण सिटौला। मतदानका लागि ३ हजार २१८ महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट भएका छन्। उनीहरुले गरेको मतदान अनुसार सभापति लगायत अन्य पदहरु निर्वाचित हुने हुन्। तर माइसंसारका पाठकहरु भने यो लेख्दासम्म ७ हजार ७ सय ९४ जनाले सर्वेक्षणमा भाग लिए। के आयो त नतिजा ?
यदि माइसंसारका पाठक महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँदा हुन् त रामचन्द्र पौडेल कांग्रेस सभापति निर्वाचित हुन्थे। हिजोसम्म यो पोलमा पौडेल र देउवाबीच कडा प्रतिस्पर्धा भए पनि रातभर र आज बिहानको मतदानमा पौडेलले बाजी मारे।
कांग्रेसको विधान अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याए सभापति निर्वाचित हुनेछ। कसैकसैले ५१ प्रतिशत मत ल्याउनु पर्ने भनी लेखेका छन्। त्यो गलत हो। विधानमा यस्तो व्यवस्था छ-
यदि कसैले पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउन नसकेको भए बढी मत ल्याउने दुई उम्मेदवारबीच पुनः निर्वाचनका लागि मतदान हुनेे थियो। मानौँ पौडेलले ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत नल्याएका भए ? देउवा र पौडेलबीच पुनः निर्वाचन हुन्थ्यो।
हेरौँ देउवा र पौडेलमात्रै उम्मेदवार भए भने सिटौलाका पक्षमा रहेका मतहरु कता जाँदा हुन्?
4 thoughts on “माइसंसारका पाठक महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँदा हुन् त कसले जित्थे कांग्रेस सभापति?”
Win for Sher Bahadur Deuba will spread the message that any person outside Koirala family can be party supremo. Nepali Congress is not any family’s asset.
Win for Sher Bahadur Deuba will spread the message that any person outside Koirala family. Nepali congress is not any family’s asset.
हाहाहा भ्रस्टचारी खुम दाइ सक्किगो नि